Umhlahlandlela Wokuvula i-Akhawunti ye-XM Yokuhweba - 2020 Isinyathelo ngesinyathelo Imiyalo!
Ikhaya Forex Broker Izibuyekezo Umhlahlandlela Wokuvula i-Akhawunti ye-XM Yokuhweba
Lokhu okuthunyelwe kuzokukhombisa inqubo yokubhaliswa kwe-XM ngesinyathelo sakamuva ngesinyathelo 2020 izinqubo zokusebenzisa. Vula i-Akhawunti kungenziwa nje 5 imizuzu! Mane ulandele imiyalo engezansi yokuvula i-Akhawunti ye-XM.
I-XM ngumthengisi onconywe kakhulu we-forex. I-XM ibalwe no. 1 kwisimo se-Forex esezingeni lonyaka ongu-7 olandelanayo!
Ungayivula kanjani i-akhawunti ye-XM
1 Ungayivula kanjani i-akhawunti ye-XM
2 Umhlahlandlela Wokuvula i-Akhawunti we-XM
3 Qinisekisa ikheli lakho le-imeyili
4 Inqubo yokusebenzisa i-Akhawunti ye-XM
Ukuvula i-akhawunti ye-XM kulula kakhulu futhi kungaqedwa ngo- 5 imizuzu. Lapho uvula i-akhawunti nge-XM, inkampani edumile kakhulu yokuhweba i-forex, uzoba nezinzuzo zokuthola inzuzo ephezulu nge 888 izikhathi, $30 alikho ibhonasi yediphozi, 100% idiphozi ibhonasi nokunye ukukhushulwa okuningi.
Lungela bese uchofoza inkinobho engezansi, Ngizokukhombisa ukuthi ungayivula kanjani i-akhawunti yangempela yeXM.
Vula i-Akhawunti ye-XM
Umhlahlandlela Wokuvula i-Akhawunti we-XM
Ukuvula i-akhawunti ye-XM kulula kakhulu nge 3 izinyathelo ezilula, nje 5 imizuzu yesikhathi sakho.
Bukela le vidiyo ngezansi:
Noma ungalandela igxathu negxathu elingezansi.
Ngezansi uzobona ikhasi eliyisiqalo le-XM Real Akhawunti.
Chofoza okuluhlaza "QALA NGO $30 MAHHALA" (Vula i-akhawunti ebukhoma lapha) Inkinobho kusuka kuwebhusayithi ye-XM futhi izoyithumela kabusha Ukubhaliswa Kwe-Akhawunti Yangempela 1/2. Faka yonke imininingwane yomuntu edingekayo, kufaka phakathi ikheli lakho le-imeyili kanye nezinombolo zefoni.
I-XM inikeza i-metatrader 4 futhi 5 amapulatifomu okuhweba, womabili angamathuluzi akhiqizwe ama-MetaQuotes. I-MT5 ilusizo impela epulatifomu yokuhweba yakamuva. Ama-oda namathuluzi wokuhlaziywa kweshadi nawo angaphezu kwe-MT4.
I-XM inikeza izinhlobo ezintathu zama-micro, ama-akhawunti ajwayelekile nawama-ultralow. Uma ungumqali we-TOEX trader, sincoma ukuvula i-akhawunti encane ye-XM. Ama-akhawunti ama-Micro angadayiswa kusuka 10 amayunithi wemali, ukuze ukwazi ukutshala imali engu-90 kusuka ekutshalweni kwemali okuncane.
Umehluko kuphela phakathi kwe-akhawunti ye-XM ejwayelekile ne-akhawunti ye-XM Micro inombolo yamanani. Ukusakazeka nezimo zokusizakala ziyefana. I-XM Ultralow iyi-akhawunti yohlobo lwe-ECN enwebeka iqala ku-zero, kodwa lapho usivivinya ngempela, izindleko zokuthenga zicishe zifane. Lokho kungenxa yokuthi i-akhawunti ye-XM Zero inemali ekhokhwayo ngentengo ngayinye yokuhweba. Isilinganiso se-Forex se-akhawunti ye-XM Ultralow sesifikile 500 izikhathi, kepha akuveli ngebhonasi yediphozithi engafakwanga $30 USD, ibhonasi yediphozi kanye nohlelo lokuthembeka. Ngicabanga ukuthi i-akhawunti ejwayelekile ye-Forex ingcono ngokuphelele.
Ngemuva kokungena kuzo zonke izinkambu, chofoza ku-Go to Step 2 inkinobho.
Faka okufisayo "Iphasiwedi ye-Akhawunti " bese uqhafaza "Vula i-Akhawunti Yangempela". Olandelayo, uzobona ikhasi elithi, "Siyakuhalalisela ngokuvula i-akhawunti yangempela ngeXM."
Qinisekisa ikheli lakho le-imeyili
Ngemuva kokuvula i-akhawunti yakho ye-XM, uzothola i-imeyili yokuqinisekisa elandelayo ekhelini le-imeyili elibhalisiwe. Chofoza "Sicela uqinisekise ikheli lakho le-imeyili" inkinobho yokuqinisekisa ikheli lakho le-imeyili.
Inqubo yokusebenzisa i-Akhawunti ye-XM
Ukuze usebenzise i-akhawunti yakho ye-XM, uzodinga ukuhlinzeka ngemibhalo yokuhlonza nekheli. Okokuqala, ngena ngemvume usebenzisa iphasiwedi oyimisile lapho ubhalisela iLungu le-XM kanye ne-MT4 / Umazisi weMT5 uthumele ku-imeyili.
Lapho ungena ekhasini lelungu le-XM, uzobona isaziso ekhasini lakho lesilungu sokuthi i-akhawunti yakho ayizange isebenze ngoba i-akhawunti yakho ayizange isebenze.
Chofoza "Yenza i-akhawunti yakho isebenze lapha" Inkinobho yokuya esikrinini lapho ulayisha khona amadokhumenti akho.
#1 - Ikhophi yombala yepasipoti evumelekile noma i-ID esemthethweni (ilayisense yomshayeli, Ikhadi le-ID, Ikhadi Lokubhaliswa Kwezakhamuzi Eziyisisekelo, Ikhadi lami Lenombolo, njll). I-ID kumele ibe semthethweni futhi ifake igama, usuku lokukhipha noma usuku lokuphelelwa isikhathi, usuku lokuzalwa, njalo njalo.
Ngokuyinhloko, sicela uhambise ilayisense lakho, ikhadi labahlali, ipasipoti, njll. njenge-ID yakho.
#2 - Thumela izikweletu zakamuva zokusebenzisa (ugesi, igesi, amanzi, internet, uxhumano lwe-TV ye-cable, njll) noma ibhange (isikweletu / I-debit card) Isitatimende esikhishwe ekugcineni 6 izinyanga! Ungahambisa ilayisense lakho lokushayela njengobufakazi bekheli uma uthumele ipasipoti yakho njengamadokhumenti obumazisi.
Ekugcineni, chofoza "Ukulayisha Imibhalo" inkinobho yokuqedela inqubo yokusebenzisa i-akhawunti ye-XM. Isimo sekhasi lelungu sizoshintsha siye "okulindile".
Olandelayo, kuyodingeka ulinde uze uthole "ukwenza kusebenze i-imeyili ephelele". Uma amadokhumenti akho elungile, i-akhawunti yakho izosebenza ngaphakathi 24 amahora. Uma unezinkinga ngamadokhumenti, uzothola uphenyo nge-imeyili futhi uzodinga ukuthumela futhi imibhalo edingekayo. I-XM izokwazisa ukuthi yini inkinga ngokuthumela kwakho.
Isiqephu esedluleIsikhombi se-A average MT5 inkomba
Isihloko esilandelayoAma-Drunkards Walk MT5 Inkomba
Ukubuyekezwa kwe-FBS Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-FBS iyi-Forex Ephephile...